दिलीप मुननकर्मी सोध्छन्–तपाईं लगानीकर्ता कि कारोबारी ? यस्ता छन् उनका १० लगानी टिप्स
काठमाडौं : अहिले सेयर बजार घट्दोक्रममा रहेको छ । यति बेला धेरैको बुझाइमा बजार बियरिस हो की भन्ने आशंका पनि बढ्न थालेको छ ।
१८८१ पुगेको नेप्से १५०० मुनिसम्म पुग्नु के करेक्सन मात्रै हो त ? धेरैको अनुमान विपरित नेप्सेमा देखिएको यो करेक्सनले शेयर बजारलाई साँच्चिकै अनुमान गर्न नसकिने बजारको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
त्यसो भए अहिलेको अवस्था के हो अनि अब के गर्ने ? सबै लगानीकर्ता र कारोवारीको मनमा यही प्रश्न उब्जेको छ । अरु लगानीकर्ता जस्तै म पनि सोचनीय अवस्थामा छु र यो वास्तवमा साइक्लिक बियरिस हो वा सिजनल बियरिस ठम्याउन सकेको छैन ।
विगत वर्षहरुमा पनि केही समय बजारले न्यून विन्दु कायम गर्दथ्यो । केही वर्ष अगाडिसम्म फागुन–चैतलाई सेयरको अफ सिजन मानिन्थ्यो र त्यसबेला निकै कममात्र कारोवार हुन्थ्यो ।
गत वर्ष पनि भदौतिर बजार न्यून विन्दुतिर ओर्लिएको थियो । यो वर्ष दर्शैं अगाडि बजार तल झर्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए र बजारमा त्यस्तै किसिमका हल्ला फैलिएको पनि थियो । तर अनुमान विपरित बजारमा सामान्य करेक्सन मात्र भयो । तर तिहारपछि बजार बढ्ने आशामा बसेका लगानीकर्ता र कारोवारी अहिले चकित परेका छन् ।
सबै अनुमान विपरीत बजारले उल्टो चाल चालेको छ । त्यसैले, केहीले यसलाई बजार क्र्यासको अवस्था पनि भन्न थालेका छन्, भने केहीले बियरिस । तर मेरो बुझाइमा यो सिजनल बियरिस मात्र हो । सम्भवतः अबको एक महिना बजार यस्तै न्यून विन्दुमा रहने छ र त्यसपछि पुनः आफ्नै लयमा फर्कनेछ ।
यदि बजारको विगतको चक्रलाई हेर्ने हो भने अहिले बजार बियरिस हुन नपर्ने हो र क्र्यास त झनै होइन । किनभने केही दिन अगाडिसम्म पनि बजार सूचकांक घटेपनि कारोवार रकम राम्रो थियो ।
लाग्छ, अहिले ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरु थकाइ मार्न र दसैं अगाडि बुक गरेको मुनाफा व्यवस्थापन गर्नमा नै व्यस्त छन् भने साना तथा मध्यम वर्गका लगानीकर्ता वाध्यताले विक्री गर्ने र सस्तोमा किन्ने होडमा छन् ।
बजार अब के हुन्छ त ?
गत मंसिर २ गतेदेखि बजार असामान्य बनेको पक्कै हो र यो कता गएर स्थिर हुन्छ अनुमान गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगको छ । अर्थतन्त्र गत वर्ष भन्दा राम्रो छ तर तरलतामा दबाब आएका कारण बैंकको ब्याजदरमा स्वभाविक वृद्धि देखिँदा सेयर बजारमा त्यसको केही नकारात्मक प्रभाव भने परेकै हो ।
यो सँगै राजनीतिक अवस्थामा आएको अन्योलताले बजारलाई थप नकारात्मक बनाउन केही सहयोग पुगेकै हो । बजारले अहिलेको बुललाई निरन्तरता दिन्छ वा साँच्चिकै बियरिस हुन्छ थाहा पाउन अझै माघसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदि माघसम्म पनि नेप्से घट्ने क्रम जारी रहे बजार बियरिस उन्मुख जनाउने छ र माघको दोस्रो साताबाट विस्तारै बजार बढ्न थालेमा भने फेरि अहिलेको बुललाई केही उचाइसम्म पु¥याउने छ ।
के नेप्से १००० तल वा २००० अंक माथि जान्छ ?
अहिले बजारमा दुईथरिका लगानीकर्ता र विश्लेषक देखिएका छन् । विगतमा बजारमा त्यतिधेरै विश्लेषक नहुँदा लगानीकर्ताहरुले आफ्नै अनुभव र सूचनाको आधारमा बियरिस र बुल बजारमा कारोबार गर्दै आएका थिए । अर्को शब्दमा अन्दाज र अनुभव मुख्य औजार थिए ।
तर अहिले प्राविधिक विश्लेषणका सफ्टवेयरमा पहुँच, सचेतनामा वृद्धि, तालिममा पहुँच, सामाजिक सञ्जालको व्यापकता अनि अनलाइन मिडियाले गर्दा सूचना, विश्लेषण र मानिसको तर्क क्षमता धेरै जनासम्म पुगेको छ । यसले एकातिर लगानीकर्ताहरुलाई फाइदा भएको छ भने अर्कोतिर निराशा र आकांक्षा बढाउन पनि केही हदसम्म सघाएको छ ।
यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने बजार अझै सामान्य हुन सकेको छैन, सूचकांकमा उतारचढाव मात्रै होइन रकम पनि निकै तलमाथि भइरहेको छ । माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्तमात्र होइन लगानीको सामान्य सिद्धान्त विपरीत बजार चल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
लगानीकर्ताको एउटा समूह निकै निराश बनेका छन् र बजार क्र्यास भयो, अब खत्तम भयो, हामी सबै जोगी हुने भयौं भन्ने त्रसित भएका छन् भने अर्को समूह बजारमा स्वभाविक करेक्सनका कारण बजार घटेको वा घटाइएको हुँदा बजारले २००० को विन्दु पार गर्नेमा विश्वस्त छन् ।
हुनतः बजार यस्तै विपरीत अपेक्षाहरुले गर्दा नै चल्ने हो तर यस्तो अपेक्षा स्वभाविक र यथार्थपरक हुनुपर्दछ, अन्यथा यसले मानसिक तनावबाहेक केही दिँदैन । मेरो विचारमा अहिलेको बजार विगतको भन्दा निकै कुराले भिन्न छ ।
अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्तासँगै बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताका रुपमा धेरैवटा म्युचुअल फन्ड कम्पनीहरु छन्, जसले बजारलाई १००० अंक भन्दा तल जानबाट रोक्नेछ । यस्तै, बजार निकै फराकिलो भएको छ ।
कारोवार सहज भएको छ र धितोपत्र बोर्डले तारिफयोग्य सुधारका कामहरु पनि अगाडि बढाइरहेको छ । लगानीकर्ताहरु निकै सचेत भएका छन् भने ऋणमा पहुँच बढेको छ । यस्ता कारणहरुबाट पनि बजार विगतमा जस्तो ३०० मा पुग्ने वा अहिले भनिए जस्तो १००० मुनि जाने सम्भावना कम रहेको छ ।
त्यसोभए बजार २००० अंक माथि पुग्छ त ? होइन हाम्रो अर्थतन्त्र, विगतको तुलनामा बजारमा निकै धेरै सेयर आपूर्ति हुनु, बढ्दो ब्याजदर, बजार चक्रको मध्य अवस्थालगायतले गर्दा अब निकै बढेर २००० पार गर्न केही समय लाग्न सक्छ । यो त्यति सहज छैन ।
१. सकिन्छ, माघ–फागुनसम्म कुर्नुहोस् र बजारको वास्तविक गतिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुहोस् । यस कुराइका दौरान नाफासँगै सम्भावित घाटाको लागि पनि मानसिक रुपमा तयार रहनुस् ।
२. सेयर बजारमा आफ्नो लगानी वा कारोवार बारेमा स्पष्ट हुनुहोस् । लगानीकर्ता बन्ने सोच भएमा बजार जति घटेपनि चिन्ता लिन छोडनुस् र लगानी जुटाउन सके थप सेयर खरिद गरी औसत लागत घटाउनुहोस् ।
कारोवारी भएर तत्काल मुनाफा खोजेको हो भने केही नाफा भएका, तुलनात्मक रुपमा कम घाटा भएका कम्पनी बेचेर धेरै घाटा भएका कम्पनीहरुको सेयरको औसत लागत घटाउनुहोस् ।
३. बैंकहरुबाट ऋण लिइराख्नु भएको छ भने थप सेयर दिएर वा ऋण रकम घटाएर सम्भावित मार्जिन कललाई व्यवस्थापन गर्नुहोस् ।
४. आफूसँग लगानीयोग्य रकम छ भने सानोसानो परिणाममा राम्रा कम्पनीका सेयर किन्न नछोड्नुस् ।
५. बढी जोखिमपूर्ण सेयरमा केही घाटा बुक गरेर भएपनि कम जोखिमपूर्ण सेयरमा सिफ्ट हुनुहोस् ।
६. कारोबारी हुनुहुन्छ भने विस्तारै लगानीकर्ता बन्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
७. लगानी गर्दा थप विश्लेषण गरी सम्भावित नाफाघाटालाई आत्मसात गर्न तयार भएर लगानी गर्नुहोस् ।
८. लगानी गर्दा छोटो अवधि होइन, दीर्घकालीन मुनाफालाई ध्यानदिनुस् । अझ सेयरमा गरिने लगानीको वास्तविक प्रतिफल प्राप्त गर्न अन्य व्यवसायको तुलनामा निकै धैर्य र समय लाग्दछ । किनभने व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न लगानीकर्ता र व्यवस्थापनसँगै अर्थतन्त्रको गतिमा यसको निर्भरता रहन्छ ।
९. विगत वर्षहरुमा केही कारोबारीहरुले छोटो अवधिमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्नुभयो होला । सोही आधारमा सेयर भनेको छोटो अवधिमा धेरै कमाइ गर्ने ठाउँ हो भनेर मात्र नबुझ्नुस् ।
१०. लगानी होस् वा कारोबार न्यायोचित प्रतिफलको अपेक्षा गर्नुहोस् । कसैले प्राप्त गरेको मुनाफा भन्दा लगानीमा आफ्नो अपेक्षा र बजारको सम्भावनालाई ध्यान दिनुहोस् । प्रत्यक्ष सहभागी व्यवसायमा १५–२० प्रतिशत मुनाफा अनि सेयरबजारमा १०० प्रतिशत मुनाफा न्यायोचित नहोला की ?
(मुननकर्मी सेयर लगानीकर्ता हुन् ।)